Venerable Kusalasami: September 2010
Posted by ashin kusalasami at 12:50 PM 1 comment:
Posted by ashin kusalasami at 7:11 AM No comments:
ဂူဒို(Gudo)ဆိုတာ ဂျပန်အင်ပါယာကိုယ်တိုင် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ အင်ပါယာရဲ့ဆရာဆိုပေမယ့် သူက ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ်ကန်နဲ့ အေးဆေးသက်သာနေသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေရာအနှံ့ကို သူတောင်းစားတစ်ယောက်လို ဦးတည်ရာမဲ့ လျှောက်သွားနေပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ အီဒိုမြို့ (Edo)ကို သွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ တက်ကန်နက(Takenaka)ဆိုတဲ့ ရွာလေးကို ရောက်ပါတယ်။ အီဒိုမြို့ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ အခြေစိုက်ရာ တော်ဝင်စစ်သူကြီးတစ်ဦးရဲ့မြို့ ဖြစ်တယ်။ ရွာလေးကို သူရောက်သွားတော့ ညနေခင်းအချိန် ဖြစ်တယ်။ မိုးက သည်းကြီးမဲကြီးရှာချလိုက်တယ်။ ဂူဒိုကတော့ တစ်ကိုယ်လုံး စိုလို့ရွှဲလို့ပေါ့။ သူ့ရဲ့ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်လေးလည်း ပြတ်သွားတယ်။ ရွာနားက လယ်သမားအိမ်မှာ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်လေးငါးရံလောက် ရှိနေတာကို တွေ့လိုက်တော့ သွားဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
တစ်ကိုယ်လုံး စိုရွှဲနေတာကို တွေ့လိုက်တော့ အိမ်ရှင်မလေးက ဖိနပ်တစ်ရံလှူလိုက်တယ်။ အိမ်ထဲကို ၀င်ဖို့လည်း ဖိတ်လိုက်တယ်။ တစ်ညလောက် သူ့အိမ်မှာ တည်းခိုဖို့လည်း ပြောလိုက်တယ်။ ဂူဒိုကလည်း လက်ခံတယ်။ ကျေးဇူးတင်စကားလည်း ပြောလိုက်တယ်။ ဂူဒိုက အိမ်ထဲကို ၀င်တယ်။ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ သုတ်တော်တွေကို ရွတ်ဖတ်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဂူဒို့ကို သူ့အမေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။
ဂူဒို သေချာကြည့်လိုက်တော့ တစ်မိသားစုလုံးက စိတ်ဓာတ်ကျ၊ စိတ်ဆင်းရဲနေကြပါလားဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ “ဘာဖြစ်ကြတာလဲ”လို့ ဂူဒိုက မေးတယ်။ “ကျွန်မယောက်ျားပေါ့၊ သူက လောင်းကစားသမား၊ အရက်သမားလေ၊ လောင်းကစားလို့နိုင်ရင် အရက်သောက်တယ်၊ မကြားဝံ့မနာသာစကားတွေ ပြောတယ်၊ သူရှုံးပြီဆိုရင်တော့ သူတစ်ပါးဆီက ငွေတွေ ချေးတော့တာပဲ၊ တစ်ခါတစ်ရံ သူ တအားမူးလာရင် အိမ်ကို ပြန်မလာတော့ဘူး၊ ကျွန်မ ဘယ်လိုများ လုပ်ရပါ့မလဲ”လို့ အားကိုးတကြီးနဲ့ ပြောရှာတယ်။
“ကျွန်ုပ် ကူညီပါ့မယ်”လို့ ဂူဒိုက ပြောလိုက်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ “ရော့.. ဒီမှာ ငွေ၊ ၀ိုင်တစ်ဂါလံဝယ်ခဲ့၊ စားကောင်းမယ့်ဟာလေးတွေလဲ ၀ယ်ခဲ့၊ ပြီးရင် မင်းဟာမင်း အနားယူလိုက်၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ ဘုရားစင်ရှေ့ တရားထိုင်လိုက်အုံးမယ်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ညသန်းခေါင်ကျတော့ ကိုအမူးသမား ရောက်လာပြီ။ သူက လုံးဝကို မူးနေပြီ။ ရောက်လာတာနဲ့ “ဟေ့… မိန်းမ၊ ငါ ပြန်ရောက်ပြီ၊ ဘာစားစရာ ရှိလဲကွ”ဆိုပြီး အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဂူဒိုက “ငါ့မှာ စားစရာ ပါတယ်ဟေ့”လို့ လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ “ကျွန်ုပ် မိုးမိလာလို့ ခင်ဗျားမိန်းမက ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဒီအိမ်မှာ တစ်ညတည်းဖို့ ဖိတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ် ဒီည ဒီမှာ တည်းနေတာဖြစ်တယ်”လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်ုပ်က ၀ိုင်နဲ့ငါးတွေ ၀ယ်ပေးတာ၊ ကဲ…သင်လည်း စားလိုက်သောက်လိုက်ပါအုံး”လို့ ဆက်ပြောတယ်။ အမူးသမား ပျော်သွားတယ်။ သူက ၀ိုင်သောက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်သွားတော့တယ်။ ဂူဒိုကတော့ သူ့ဘေးမှာပဲ တရားထိုင်နေတယ်။ မိုးလင်းတော့ အမူးသမား နိုးလာတယ်။ ညက ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူ ဘာမှ မသိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ဂူဒိုဘက်လှည့်ပြီး “မင်း ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်ကလာတာလဲ”လို့ မေးလိုက်တယ်။ ဂူဒိုကတော့ တရားထိုင်ဆဲပဲ။ “အော်… ကျွန်ုပ်လား၊ ကျိုတိုရဲ့ ဂူဒိုပဲ (ကျိုတိုမြို့က ကျော်ကြားတဲ့ ဂူဒိုပဲ)၊ ကျွန်ုပ် အီဒိုမြို့ကို သွားမလို့”လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ အမူးသမား သူ့ကိုယ်သူ ရှက်သွားတယ်။ အင်ပါယာအရှင်သခင်ရဲ့ဆရာ ဂူဒို့ကို ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် တောင်းပန်တယ်။
ဂူဒိုက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ဆက်ပြောနေတယ်။ “ဘ၀မှာ ဘယ်အရာမှ အမြဲမတည်ဘူး၊ ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေး၊ မင်းက လောင်းကစားတွေ လုပ်တယ်၊ အရက်တွေ သောက်တယ်။ မင်းမှာ ဘာကိုမှ ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ အချိန်မရှိတော့ဘူး၊ မင်းမိသားစုတွေလည်း မင်းကြောင့် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေရတယ်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အမူးသမားဟာ အိပ်မက်က နိုးလာသူလို အသိဉာဏ်တွေ ချက်ချင်းဆိုသလို နိုးကြားလာတယ်။ “မှန်လိုက်လေ”လို့လည်း ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။ “အရှင် ဒီလို ဟောပြပေးတဲ့ ကျေးဇူးတွေကို ဘယ်လိုများ ပြန်ဆပ်ရမလဲ”လို့ ပြောပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းထိ လိုက်ပို့တယ်။
၃-မိုင်လောက်ရောက်တော့ ဂူဒိုက “မင်းပြန်တော့”လို့ ပြောတယ်။ “၅-မိုင်လောက်ထိတော့ လိုက်ပို့ပါရစေ”လို့ ပြောတယ်။ ၅-မိုင်လောက်ရှိတော့ ဂူဒိုက ပြန်ဖို့ပြောတယ်။ နောက်ထပ် ၁၀-မိုင်လောက် လိုက်ပါရစေပြောပြီး ဆက်လိုက်လာပြန်တယ်။ ၁၀-မိုင်တော့ ကျော်လာခဲ့ပြီ။ ဂူဒိုက ပြန်ဖို့ပြောတော့ “တစ်သက်လုံး အရှင့်နောက် လိုက်နေပါရစေ”လို့ တောင်းပန်တယ်။
ယနေ့ခေတ် ဇင်ဘုန်းကြီးတွေဟာ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဂူဒိုရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ အမူးသမားတစ်ဖြစ်လဲ ဇင်ဘုန်းကြီးရဲ့ အမည်ကတော့ ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလှည့်တော့တဲ့ “မုနန် (Mu-nan)”ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဇင်ဝတ္ထုလေးကို သူငယ်ချင်းတွေ စုဖတ်နေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ကြတယ်။ ၀တ္ထုလေးက ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပဲ။ ဒါပေမယ့် အမြင်တွေက ကွဲတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ ဆဋ္ဌမအာရုံကို ထိခတ်လာခဲ့တာက တူညီတဲ့ဇာတ်လေး ဖြစ်တယ်။ တူညီတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို နှလုံးသားနဲ့ ပုတ်နှိုးကြည့်တဲ့အခါ မတူညီတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ အချို့က မုနန်တရားရသွားတာကို အားကျမယ်။ အချို့က မိသားစုလေး အထီးကျန် ကျန်ခဲ့မှာကို သနားတယ်။ ဒီဝတ္ထုလေးဖတ်ပြီး ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ယသော်ဓရာကို ထားခဲ့တဲ့ သိဒ္ဓတ္ထကို အပြစ်တင်တယ်။ ဒီဝတ္ထုလေးအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်အချို့ကို ဖောက်သည်ချချင်တယ်။
ဇင်ဝတ္ထုလေးအကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်တော့ “မုနန် တရားရသွားတာ၊ အေးချမ်းသွားတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါကတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုလေး စောင့်ရှောက်သူမဲ့နေမှာကို ပိုတွေးမိတယ်ကွာ”လို့ တစ်ယောက်က တွေးတွေးဆဆနဲ့ ပြောပါတယ်။ “ဒါဆို မုနန် မိသားစုကို စွန့်ခွါခဲ့တာဟာ မတရားဘူးလို့ ဆိုချင်တာလား”လို့မေးတော့ နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့ပြီး ခေါင်းညိမ့်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ တစ်ယောက်က သဘောတူပုံတော့ မရပါဘူး။ “လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြုပ်နှံနိုင်မယ့် ၀ပ်ကျင်းလေးကို ရှာနေကြတာပဲ၊ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာကလည်း အဓိကက ကိုယ်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ပဲ၊ ကိုယ်မှအပ အခြားသူဆိုတာ ဒုတိယနေရာမှာပဲ ရှိတယ်။ ဘုရားဟောပါဠိတစ်ပုဒ်ကြားဖူးတယ်။ အဖော်ဆိုတာကို ဒုတိယ-တဲ့။ နှစ်ယောက်မြောက်ပေါ့။ အခု မုနန်ဟာ မိုက်ခဲ့တယ်။ ဆိုးသွမ်းခဲ့တယ်။ ဂူဒိုနဲ့တွေ့တော့ သူမြှုပ်နှံရမယ့် သူ့ဝပ်ကျင်းလေးကို သူတွေ့သွားတာ။ ယောက်ျားဖြစ်သူ မုနန်မှ မဟုတ်ဘူး၊ သူ့မိန်းမလည်း ဒီထက်အေးချမ်းတဲ့ရိပ်မြုံလေးကိုသာတွေ့ရင် မုနန်ကို ထားခဲ့မှာပဲ။ လူဆိုတာ အစားထိုးမရခင်အချိန်မှာ ဒါမရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ အစားထိုးစရာရသွားလို့ကတော့ မရှိမဖြစ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ငါတို့အနေနဲ့ လူသားတစ်ယောက် (ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် လူကြီး၊ လူငယ်၊ အပျို၊ အအို၊ အိမ်ထောင်ရှိ၊ မရှိ) အေးငြိမ်းရာလေးကို ရှာတွေ့သွားနိုင်တယ်ဆိုရင် ငါတို့အနေနဲ့ ၀မ်းသာသင့်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အေးငြိမ်းမှုဆိုတာ အလွန်ရှားပါးပြီး အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လို့ပဲ”လို့ တရစပ် ပြောနေပါတယ်။
“မင်းကရော ဘယ်လို တွေးမိသလဲ”လို့ ဘေးနားမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ သူကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ငါ တွေးနေမိတယ်ကွ”လို့ဆိုတော့ “အေးလေ… မင်းတွေးနေတာ ငါတို့လည်း သိတာပေါ့၊ ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ”လို့ ပြောတာလေ။ “အေးကွာ… မင်းတို့ ပြောတာတွေကို ငါ သူ့အပိုင်းနဲ့သူ လက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါ စိတ်ဝင်အစားဆုံး အကြောင်းတော့ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်း မိသားစုအတွင်းကနေ ရုန်းထွက်သွားခဲ့တဲ့ မုနန်ကို မိသားစုတာဝန်မကျေပွန်သူလို့ ယူဆနေတယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်၊ ငါတွေးနေတာက မုနန်ကို နှစ်ဘ၀ မြင်ကြည့်တယ်၊ မိသားစုကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်နေတဲ့ မုနန်ရယ်၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘ၀မှာ လူအများကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ မုနန်ရယ်…အဲဒီနှစ်ဘ၀ကို မင်းတို့ မြင်ကြည့်စမ်းပါ၊ သာမန်လေးပဲကြည့်၊ ဘယ်ဘ၀က အများကောင်းကျိုး ဖြစ်စေနေသလဲဆိုတာကိုလေ၊ တချို့က ပြောချင်ပြောမှာပေါ့၊ အရက်မသောက်၊ လောင်းကစားမလုပ်ဘဲ မိသားစုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြုစုကျွေးမွေးနေတဲ့ မုနန်ဘ၀ ဖြစ်လို့ရသားပဲလို့။ ဒါပေမယ့် ငါတို့က မုနန်မှ မဟုတ်တာ၊ အဲဒီတော့ ငါတွေးနေမိတာက မင်းတို့အနေနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားတဲ့ မုနန်ကို အပြစ်မတင်သင့်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ”လို့ စကားတွေ တရစပ်ပြောပြီး ငြိမ်နေပြန်ပါတယ်။
“ကိုယ်ကတော့ မုနန်တရားရသွားတာတွေ၊ မိသားစုကို စွန့်ခွါထားခဲ့တာတွေ၊ ဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာက လူတွေရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈတ္တပဲကွ၊ မင်းတို့ကြည့်လေ၊ မုနန်ဟာ လူ့ဘ၀အမြင်နဲ့ဆိုရင် လူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး၊ မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေအောင် ကျွေးမွေးသူ မဟုတ်ဘူး၊ ဆူပူသောင်းကျန်းတတ်တယ်၊ မိန်းမကို အနိုင်ကျင့်တယ်၊ အရက်သောက်တယ်၊ လောင်းကစားလုပ်တယ်၊ ဒီလိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ စိတ်သန္ဓေ ပါလာခဲ့တယ်လို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်သလဲ၊ အဲဒီအခါက မုနန်တစ်ယောက် ဒီလို အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူမှ မထင်မှာ သေချာတယ်၊ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပြောချင်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈတ္တဆိုတာ မြင်နိုင်ခဲတယ်”လို့ ပြောနေတယ်။
“ဒီနေ့ကစပြီး - ဒီလူ တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ကွာ၊ ဘယ်တော့မှ လူပီသမယ့်ကောင် မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်တော့မှ လူမွေးပြောင်မယ့်ကောင် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ အထင်မသေးတော့ဘူး။ လူတိုင်းမှာ မြင်နိုင်ခဲတဲ့ အဇ္ဈတ္တတွေ ရှိတယ်။ အမြင်ရခက်တဲ့ နှလုံးသားခံစားချက်တွေ ရှိနေတယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ ပါရမီဓာတ်ခံတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီနေ့ လူပွေ လူရှုပ်တစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်နေ့မှာ သူတော်စဉ်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး အရေးအကြီးဆုံးလို့ ငါထင်တဲ့ လောကအမြင်တစ်ရပ်ကိုလည်း ရလိုက်တယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ဘယ်လောက် တန်ခိုးကြီးတဲ့ သူတော်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ဘုန်းကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ အထင်မကြီးတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတွေမှာ မြင်နိုင်ခဲတဲ့ အဇ္ဈတ္တတွေ ရှိတယ်။ ဒီနေ့ သူတော်စင်ဟာ နောက်တစ်နေ့ သူယုတ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပဲ” ခိုင်ခိုင်မာမာ လေးလေးနက်နက် ဆိုနေပါတော့တယ်။
စကားဝိုင်းလေးပြီးတော့ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နေသော ညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင် မုနန်၏ အေးချမ်းမှုကို ဓာတ်ကူးနေခဲ့တယ်။ ကျီးကန်းတစ်ကောင်က စူးစူးဝါးဝါး ထအော်တယ်။ နံရံတစ်ဖက်ခြမ်းတိုက်ခန်းက တီးတိုးသံနဲ့ ချောင်းဆိုးသံသဲ့သဲ့ကို ကြားရတယ်။ သူ့အဇ္ဈတ္တထဲကို သူ နှိုက်ကြည့်တယ်။ “သူများ အဇ္ဈတ္တမပြောနဲ့ ငါ့အဇ္ဈတ္တတောင် ငါ မမြင်နိုင်သေးပါလား”လို့ ငြီးတွားနေတော့တယ်။
Posted by ashin kusalasami at 9:07 PM 1 comment:
မေး။ ။ တပည့်တော် တစ်ခု မေးလျှောက်ပါရစေ..... ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ပါဏာတိပါတံ မကျူးလွန်ရဘူးလို့ နားလည်ထားပါတယ်... ဘယ်လိုနည်းလမ်းနှင့်မဆို ကျူးလွန်ခွင့်မရှိပါ...... ယနေ့ ကမ္ဘာစစ်တပ်များ၊ မြန်မာပြည်မှ စစ်တပ်များမှ စစ်သားများမည်သို့ ပြရပါမည်နည်း။ တိုင်းပြည်ကို မည်သို့ ကာကွယ်ရပါတော့မည်နည်း။ ဘာအရေးကိစ္စကိုမှ ဦးတည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလျင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများ စစ်တပ်ထားခြင်းသည် ခုခံကာကွယ်သည်ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဘုရားဟောနှင့် မညီဟု နားလည်မိပါသည်ဘုရား။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သို့ ဖြစ်ရမည်၊ ဘုရားဟောအမှန်ဖြင့် မိန့်ကြားတော်မူပါရန် လေးစားစွာဖြင့် တင်လျှောက်အပ်ပါသည် ဘုရား.....
မေးခွန်းမေးသူက ဤအမေး၊ အဖြေကို အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်ဖို့ မေးထားတာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မေးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ နာမည်လည်း အသုံးမပြုထားသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဦးဇင်းအနေနဲ့ အခြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်လည်း သိသင့်သိထိုက်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်လို့ ယူဆတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်….
ဖြေ။ ။ ဒီမေးခွန်းကို လေ့လာကြည့်ရင် အဓိက ပြဿနာက စစ်တပ်တည်ရှိခြင်းနဲ့ ပါဏာတိပါတကံ ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်နေသယောင် ထင်မြင်စရာရှိနေတဲ့ အချက်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် စစ်တပ်ဆိုတာ မရှိရဘူးလို့ ပြောချင်သလား။ သို့မဟုတ် စစ်တပ်ရှိနေခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ ဆိုချင်သလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာက သူ့အသက်မသတ်ရဘူးလို့ ပြောပြီး စစ်တပ်ရှိမှုကိုတော့ မငြင်းပယ်ထားဘူး၊ ဒါဟာ ရှေ့နောက်မညီဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုချင်သလား။ ဒီလို အတွေးမျိုးက ယေဘုယျ ကြည့်ရင် ဖြစ်သင့်တယ်။ မေးသင့်မေးထိုက်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါကို နားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အချို့ကို ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။
ပထမဆုံး မေးခွန်းထဲက မေးသူရဲ့ စကားရပ်လေးတွေကို အရင်ဆုံး ပြောကြည့်ရအောင်….
“ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ပါဏာတိပါတကံ မကျူးလွန်ရဘူးလို့ နားလည်ထားပါတယ်”တဲ့။ သာမန်ကြည့်ရင် ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ (အဲဒီစကားရပ်)ရဲ့ concept ကို သိဖို့ လိုပါတယ်။ Concept အရ ဆိုလိုချက်တွေ အများကြီး ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို မကွဲပြားဘဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရ အတိအကျဖြစ်အောင် ပြောရရင် “ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ပါဏာတိပါတကံကို ကျူးလွန်လျှင် ရရှိလာနိုင်သောအပြစ်တို့ကို အကြောင်း+အကျိုးပြလျှက် မကျူးလွန်သင့်ကြောင်း ညွှန်ပြထားတယ်လို့ နားလည်ထားပါတယ်”လို့ ဆိုမှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အတိအကျ ထင်ဟပ်မိပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ထပ်ရှင်းပြပါမယ်။
ဒီစကားလေးကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာမှာ ပညတ်တော် (၁၀)ပါး ရှိတယ်။ အခြားဘာသာတွေမှာလည်း များသောအားဖြင့် အသက်မသတ်ရဆိုတာတွေ ပါတယ်။ လူ့(တိရစ္ဆာန်များ မပါ) အသတ်ကို မသတ်ရဘူးလို့ တားမြစ်ထားကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ မသတ်ရတာလဲ။ သူတစ်ပါးအသတ်ကို ဘာကြောင့် မသတ်နဲ့လို့ ပြောတာလဲ။ လေ့လာကြည့်လိုက်ရင် ယေဘုယျအကြောင်း (၂)ချက်ကို တွေ့ရတယ်။ နံပါတ် (၁)က ထာဝရဘုရားရဲ့ နှုတ်မြွတ်စကားဖြစ်လို့။ နံပါတ် (၂)က ကိုယ်ချင်းစာတရားထားရှိခြင်းအားဖြင့် မသတ်သင့်ကြောင်း တွေ့ရတယ်။ သတ်ရင် ဘာဖြစ်သလဲ။ ထာဝရဘုရားရဲ့ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်လို့ အပြစ်ကြီးတယ်။ ယေဘုယျတော့ ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲ ထွက်ပါတယ်။ ထာဝရစကားကို ချိုးဖောက်ခြင်းဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဆန့်ကျင်ရာ ရောက်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာတရားကို ဆန့်ကျင်ရာကျတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ သူ့အသတ်ကို မသတ်ရ..လို့ ဂေါတမဗုဒ္ဓက ပညတ်ထားသလား။ အဖြေကတော့ “မဟုတ်ဘူး”။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက သူ့အသတ်မသတ်ရလို့ မပညတ်ထားဘူး။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ နည်းနည်းထူးဆန်းသွားမယ်ထင်တယ်။ ဦးဇင်းဆိုလိုတာကို အောက်မှာ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားက သူ့အသတ်(အသက်ရှိသတ္တ၀ါအားလုံး)ကို သတ်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်၊ ဘာတွေ ခံစားရတတ်တယ်။ မသတ်ရင် ဘယ်လို အကျိုးထူးတွေ ရနိုင်တယ်။ ဒီလိုပဲ ပြောတယ်။
“သူတစ်ပါး(သက်ရှိသတ္တ၀ါအားလုံး)ရဲ့ အသက်ကို သတ်ဖြတ်ရင် အသက်တိုခြင်း၊ အနာရောဂါများခြင်း၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း၊ အားအင်ချိနဲ့ခြင်း၊ အကြောက်တရား အားကြီးခြင်း၊ မိတ်ဆွေ နည်းခြင်း၊ သူတစ်ပါးသတ်တာ ခံရခြင်း…..စတဲ့အကျိုးတရားတွေကို ခံစားရမယ်၊ ဒါကြောင့် သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲ၊ အကုသိုလ်ဆိုတာ ပဟာတဗ္ဗ-ပယ်သင့်တဲ့အရာ၊ အကတ္တဗ္ဗ- မပြုသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်”
လို့ ဟောပါတယ်။ “ပဟာတဗ္ဗ၊ အကတ္တဗ္ဗ”ဆိုတဲ့ ပါဠိလေးက “should eradicate, should not do” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ အထက်ပါ အကျိုးတရားတွေကို မကြောက်ရင် မိမိဆန္ဒအရ လုပ်ချင်လည်း လုပ်ပေါ့ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒါက အရေးကြီးတယ်နော်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက သူ့အသတ်မသတ်ရလို့ မပညတ်ထားဘူး။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအလိုအရ သူပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မှန်နေတဲ့အမှန်တရားဆိုတာ မရှိဘူး။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတွေမှာတော့ ထာဝရက မှန်တယ်လို့ ပညတ်ထားလိုက်လို့ မှန်နေတဲ့အရာတွေ ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အဲ့ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဂေါတမမြတ်စွာက မှန်တယ်လို့ ပြောလို့ မှန်တယ်ဆိုတာမျိုး မရှိဘူး။ သဘာဝအရကိုက မှန်နေလို့ မှန်နေတာ။ ဆိုလိုတာက အကြောင်း+အကျိုးကို ချပြတယ်။ အကြောင်း+အကျိုးကို သရုပ်ခွဲပြတယ်။ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်က ကာယကံရှင်ရဲ့ တာဝန်ပါ။ ဒီကွဲပြားချက်ကို အသေအချာ စဉ်းစားစေလိုပါတယ်။
ပညတ်ပေးတယ်၊ သတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဟာ “မလုပ်နဲ့၊ လုပ်ရင် ပညတ်သူကို ဆန့်ကျင်တာပဲ”လို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု ပြောကြည့်ရအောင်။ အထက်လူကြီးတစ်ယောက်က “ဟေ့ကောင် ဒါကို လုပ်လိုက်စမ်း သို့မဟုတ် ဒါကို လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့”လို့ ပြောတာဟာ လုပ်ကို လုပ်ရမယ်နဲ့ လုံးဝမလုပ်ရဆိုတဲ့ အမိန့်အာဏာသံ ရှိပါတယ်။ ပုံသေသတ်မှတ်ချက် အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ “မလုပ်ရင်တော့ မင်း အပြစ်ကျူးလွန်ရာ ရောက်ပါတယ် သို့မဟုတ် လုပ်ရင်တော့ မင်း ငါ့ကို ဆန့်ကျင်တာပဲ”လို့ သက်မှတ်ပေးရာကျပါတယ်။
ဒီလို မဟုတ်ဘဲ “ဒါလေးလုပ်ရင်တော့ ဒီလို အကျိုးတရားတွေ ရှိတယ်။ ဒါကို လုပ်ရင်တော့ မင်းလည်း မကောင်းဘူး၊ မင်းမိသားစုအတွက်လည်း မကောင်းဘူး။ မင်းပတ်ဝန်းကျင်လည်း မကောင်းဘူး၊ အဲဒီ မကောင်းတာတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒါကို မလုပ်ပါနဲ့လား။ မလုပ်စေချင်ဘူး”။ ဒါကျတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နဲ့ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်မှုကို ဦးစားပေးရာ ကျတယ်။ “မင်း ဒါကို မလုပ်သင့်ဘူး”လို့ ငါပြောတယ်။ လုပ်ရင်တော့ မင်းကို ငါကတော့ ဘာအရေးယူမှုမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတော့ မင်းပဲ ခံစားရမယ်။ ဒါက ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ အကြောင်း+အကျိုးနိယာမနဲ့ လူသားအပေါ် ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒက လူသားကို အမိန့်မပေးပါဘူး။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒက “လုပ်ခြင်းနဲ့ မလုပ်ခြင်း” နှစ်ခုစလုံးအတွက် ၀င်ရောက်ခြယ်လှယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကို အရင်ဆုံး နားလည်ထားရမယ်။ လုပ်သင့်ခြင်းနဲ့ မလုပ်သင့်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒဿန၊ အမြင်၊ အတွေးအခေါ်တွေကိုပဲ လမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ လုပ်သင့်ရင် လုပ်သင့်တဲ့အကြောင်း၊ မလုပ်သင့်ရင်လည်း မလုပ်သင့်ကြောင်းကို အကျိုးနဲ့အကြောင်းကို ချပြရုံသာချပြပြီး လုပ်ဖို့၊ မလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်တာဝန်ကိုတော့ ကာယကံရှင်ကိုပဲ အာဏာကုန် လွှဲအပ်ထားပါတယ်။ ဒီအချက်က ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတွေနဲ့ ကွာဟနေတဲ့ အဓိကအချက်ပဲ။
ဒီတော့ မေးခွန်းမေးသူရဲ့ “ဘယ်လိုနည်းလမ်းနှင့်မဆို ကျူးလွန်ခွင့်မရှိပါ”ဆိုတဲ့စကားကလည်း အရာမထင်တော့ဘူးပေါ့။ ကျူးလွန်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်ချင် ကျူးလွန်ပေါ့။ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပဲ။ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ “အကောင်း+အဆိုး လုပ်ပိုင်ခွင့်”အားလုံး လူသားမှာ အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ “ကျူးလွန်ခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့်”ဆိုတဲ့ ဘက်နှစ်ခုလည်း အပြည့်ရှိနေတာပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကောင်းအဆိုး လုပ်ရပ်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုတော့ သင် တာဝန်ယူရမယ်။ ဘယ်ထာဝရ၊ ဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကမှ ဥုံဖွဆိုပြီး လုပ်ပေးလိုက်လို့ မရဘူး။ ဒါက ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ အဓိက သော့ချက်ပဲ။
နောက်ပြီး မေးခွန်းရှင်က “တိုင်းပြည်ကို မည်သို့ ကာကွယ်ရပါတော့မည်နည်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများ စစ်တပ်ထားခြင်းသည် ခုခံကာကွယ်သည်ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဘုရားဟောနှင့် မညီဟု နားလည်မိပါသည်ဘုရား”
အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပေးခဲ့တဲ့ ဟောကြားချက် သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသော့ချက်ကို နားလည်ပြီဆိုရင်တော့ “ဘုရားဟောနှင့် မညီဟု နားလည်မိပါသည်ဘုရား”လို့ မေးနေစရာပြောနေစရာလည်း မရှိတော့ပါ။ အခုပြောတဲ့အထိ နားလည်မိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘုရားဟောနှင့် ညီခြင်းမညီခြင်းကို အဓိက မထားပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဗုဒ္ဓ၀ါဒက ညွှန်ပြတဲ့ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုလုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြချက်တွေကို ရှင်းလင်းသေချာစွာ နားလည်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြင့် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးရေးကိုသာ ဂရုစိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါ နောက်ထပ်သိသင့်တာ၊ သတိပြုစရာတစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုတာ လောကုတ္တရာရေးကိုသာ အဓိက ဟောကြားညွှန်ပြတဲ့ ဘာသာမဟုတ်ဘူး၊ လောကရေးကိုလည်း အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ လက်ခံထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ လောကရေးက လောကရေးသက်သက်၊ ဘ၀လွတ်မြောက်ရေးက ဘ၀လွတ်မြောက်ရေး သီးသန့်ခွဲခြားထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကလဲ “အရှင်မင်းကြီး… တိုင်းပြည်ကာကွယ်တဲ့စစ်တပ်မထားနဲ့၊ စစ်တပ်ဆိုတာ ငါနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်”လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ စစ်တပ်ရှိမှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ ဟောကြားချက်တွေ အများကြီးပါပဲ။ စစ်တိုက်တဲ့ ကောသလဘုရင်စတဲ့ ဘုရင်တွေ၊ စစ်သူကြီးတွေနဲ့ တွေ့ရင်လည်း စစ်တပ်မရှိသင့်ကြောင်း မဟောကြားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ မဟောတာလဲ။ လောကအရေးဆိုတာကို သို့မဟုတ် လောကနိယာမကို သိမြင်သဘောပေါက်ထားလို့ပါပဲ။
နောက်ပြီး စေတနာကိုလည်း ထည့်တွက်ရပါမယ်။ စစ်သားတစ်ယောက်ကို “မင်း ဘာဖြစ်လို့ စစ်သား လုပ်ချင်လဲ”လို့ မေးရင် (ယေဘုယျအားဖြင့်) “ငါ လူသတ်ချင်လို့ စစ်သားလုပ်တာ”လို့တော့ ဘယ်စစ်သားမှ ဖြေမယ်မထင်ပါဘူး။ ပါဏာတိပါတကံကို ကျူးလွန်ချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ စစ်သားလုပ်သူရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ယေဘုယျလို့ ထပ်ဖြည့်ပါအုံးမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ စစ်သားလုပ်သလဲဆိုတော့ မိမိနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ချင်လို့ပါ။ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ စေတနာ၊ စောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ စေတနာက အရင်းခံပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုသလို အမျိုးမျိုးတော့ စေတနာတွေက ကွဲပြားနေမှာပဲ။ အဓိက ပြောချင်တာက စစ်သားလုပ်ခြင်းဟာ ပါဏာတိပါတကံကို ကျူးလွန်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်တာကိုပါပဲ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ဗိမ္ဗိသာရလို သောတာပန်ဘုရင်တွေ၊ အဇာတသတ်တို့လို ဘုရားရှင်အပေါ်မှာ လေးစားယုံကြည်သူဘုရင်တွေ အများကြီးပါပဲ။ သောတာပန်ဘုရင်တွေဟာ ဘုရားအပေါ်မှာ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တာကြောင့် ဘုရားခိုင်းတာ အကုန်လုပ်မယ့်သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို စစ်တပ်ဆိုတာ မရှိသင့်ကြောင်း၊ စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်း မဟောပြောခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ လောကသဘာဝဓမ္မအရ လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာ ရောနေတဲ့အတွက် အာဏာကို အသုံးပြုရတဲ့အခါ စစ်တပ်ဆိုတာ ရှိနေရမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ လောကရေးရာကို ခွဲခြားနားလည်တော်မူလို့ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ အများကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စတုတ္ထနိပါတ်၊ စူဠကာလိင်္ဂဇာတ်မှာ လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးကို အတိုချုံးပြောချင်ပါတယ်။ ကာလိင်္ဂတိုင်း၊ ဒန္တပူရမြို့က ဘုရင်ကာလိင်္ဂမင်းဟာ ဒဿကတိုင်း၊ ပါဋလိမြို့ကို လာရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘုရားအလောင်း နန္ဒိသေနအမတ်ဟာ အဿကဘုရင်နဲ့ စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်ပြီး ကာလိင်္ဂမင်းရဲ့ စစ်တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အများစုကောင်းကျိုးအတွက် စစ်တိုက်ရတဲ့၊ သို့မဟုတ် အသက်သေမှုမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲခဲ့တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူတွေကို နေရင်းထိုင်ရင်း သေကြေကြပါစေ၊ နာကျင်ကြပါစေ၊ ပျက်စီးကြပါစေဆိုတဲ့ စေတနာထက် လောကလူသားများ ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ စေတနာက လွန်ကဲနေကြောင်း သတိပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ စစ်ပွဲမှာ လူသတ်တာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြစ်တော့ရှိမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ဘက်ရန်သူကို သတ်ဆဲအခါမှာ သေစေချင်စိတ်တော့ ရှိနေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မူလစေတနာဖြစ်တဲ့ အများပြည်သူ အေးချမ်းပါစေ၊ ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေဆိုတဲ့ စေတနာက လွန်ကဲခဲ့တော့ သာမန်ဒေါသအလျှောက်သတ်တဲ့ အမှုလောက်တော့ အပြစ်မကြီးနိုင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ (ဒါကလည်း လူအားလုံး(စစ်သားအားလုံး)ရဲ့ အဇ္ဈတ္တကို အကုန်ပြောလို့တော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ယေဘုယျဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ ထပ်ပြောရအုံးမယ်။) အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေက ဘုရားအလောင်းတော်ဘ၀က ဖြစ်ရပ်တွေပါ။
မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုလည်း ဆက်ပြောပါမယ်။ ဗိမ္ဗိသာရမင်း လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ မင်းကြီးက “တိုင်းပြည်အစွန်အဖျားမှာ လူအများ ဒုက္ခရောက်အောင် သောင်းကျန်းနေသူတွေ ရှိနေတယ်၊ အချင်းတို့ သွားကြပါ၊ အဲဒီဒေသကို စည်ပင်ဝပြောအောင် လုပ်ကြပါ”လို့ အမိန့်ရှိလိုက်ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ စည်ပင်ဝပြောအောင် လုပ်ကြ၊ တိုးတက်အောင် လုပ်ကြ-ဆိုတဲ့ စကားကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ သူပုန်ပြဿနာကို ရှင်းခိုင်းတာဖြစ်ပေမယ့် သူပုန်ကို သတ်ချင်တဲ့စေတနာ မပါဘူး။ သူပုန်ပြဿနာရှင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ အသက်တွေ သေကြမှာဆိုတာ သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ သေပါစေဆိုတဲ့ စိတ်စေတနာကို ပြဓာန်းမထားဘူး။ အဲဒီဒေသမှာ တိုးတက်မှု၊ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှု ရစေလိုတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာ၊ အများကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေချင်တဲ့စေတနာက လွန်ကဲနေပါတယ်)။
အဲဒီအခါမှာ စစ်သားတွေက စဉ်းစားပါတယ်။ “စစ်တိုက်သွားရမှာဆိုတော့ ငါတို့ မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေ အများကြီး ဖြစ်တော့မယ်။ ဒီအကုသိုလ်တွေ မဖြစ်အောင် ငါတို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြရင် ကောင်းမလဲ”လို့ စဉ်းစားကြပါတယ်။ စဉ်းစားကြရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အဖြေတစ်ခု ရသွားကြတယ်။ “အချင်းတို့ သာကီဝင်မင်းသား ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတွေဟာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတွေကို ပွားစီးနေကြတယ်။ ငါတို့လည်း ရဟန်းဝတ်လိုက်ရင် အကုသိုလ်တွေ ရှောင်ပြီးသား ဖြစ်သလို ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်း ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်”လို့ဆိုပြီး ရဟန်းဝတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ စစ်သူကြီးချုပ်တွေက “ဟ…စစ်သားတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ”လို့ မေးပါတယ်။ ရဟန်းဝတ်သွားကြကြောင်း သိသွားကြတော့ ဘုရင်ဗိမ္ဗိသာရကို သွားပြောကြတယ်။ အဲဒီအခါ ဘုရင်က တရားသူကြီးအမတ်တွေကို “မင်းခစားတွေကို ရဟန်းဝတ်ပေးရင် ဘယ်လို အပြစ်ဒဏ်ပေးသင့်လဲ”လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ တရားသူကြီးအချို့က “ရဟန်းခံပေးတဲ့ ကိုယ်တော်ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်သင့်တယ်”လို့ ဖြေကြတယ်။ အချို့က “ကမ္မ၀ါစာဖတ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကို လျှာဖြတ်သင့်တယ်”လို့ ဖြေကြတယ်။ အချို့က “ရဟန်းခံတာမှာ ပါတဲ့ကိုယ်တော်တွေရဲ့ နံရိုးတွေကို ရိုက်ချိုးသင့်တယ်”လို့ ဖြေကြတယ်။
ဒါနဲ့ မင်းကြီးဟာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားထံ ရောက်သွားပါတယ်။ သဒ္ဓါတရားမရှိသူ၊ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်မဆည်းကပ်သူတွေဟာ အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကို ပြစ်မှားနိုင်စရာရှိတဲ့အတွက် မင်းခစားများကို ရဟန်းပြုမပေးဖို့ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း “အရှင်မင်းကြီး စစ်တပ်ဆိုတာ သူများအသတ်ကို သတ်ဖြတ်နေရတာ၊ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ သူပုန်တွေ သောင်းကျန်းပါစေ၊ ထားလိုက်၊ စစ်တပ်ကိုလည်း ထားမနေနဲ့၊ ဖျက်သိမ်းလိုက်”လို့ မိန့်တော်မမူခဲ့ပါဘူး။
မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူလိုက်တာက “ရဟန်းတို့ မင်းခစားများကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးရ၊ ပြုလျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်စေ”လို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ လောကအရေးကို မျက်ကွယ်မပြုဘူး၊ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာဆိုတဲ့ လောက၊ ဓမ္မ နှစ်ဘက်လုံးကို မျှတစွာ လက်ခံစဉ်းစားကြောင်း ထင်ရှားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ဦးဇင်းရဲ့ အဖြေကို ဒီမှာပဲ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင် ထပ်မေးလို့ ရပါတယ်။ မည်သည့်ဘာသာကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ စိတ်မရှိပါ။ လက်ရှိအနေအထားကို ပိုမိုထင်ဟပ်စေလိုတဲ့အတွက် အခြားဘာသာများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ashin kusalasami at 4:28 PM No comments:
တစ်ခါက ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မေဂျီ (Meiji)ခေတ်မှာ နန်အင်း (Nan-in)လို့ ခေါ်တဲ့ ဇင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါး ရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ဦး ဇင်အကြောင်းလေ့လာဖို့ သူ့ဆီ ရောက်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးက လဘက်ရည်နဲ့ ဧည့်ဝတ်ပြုတယ်။ သူက လဘက်ရည်ကို ပါမောက္ခကြီးရဲ့ ခွက်ထဲကို ပြည့်သွားအောင် ထည့်ပေးတယ်။ အပြည့်ထည့်ပြီးတာတောင် သူက ဆက်ထည့်ပေးနေတယ်။ ပါမောက္ခကြီးက လဘက်ရည်တွေ လျှံကျနေတာကို ကြည့်နေတယ်။ နောက် သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ “ပြည့်လျှံနေပြီလေ၊ လဘက်ရည်က ခွက်ထဲ ဘယ်လိုလုပ် ရောက်တော့မလဲ”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ဘုန်းကြီးက “ဒီခွက်လိုပဲ၊ သင့်မှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ယူဆချက်တွေ၊ ကြိုတင်တွေးဆချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပြီ။ ဒီတော့ သင့်ခွက်ကို ဗလာဖြစ်အောင် မလုပ်ဘဲ ဇင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်က ဘယ်လို ပြောလို့ ရတော့မလဲ”လို့ ပြောလိုက်တယ်။
တစ်ခါက သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အခန်းထဲ ရောက်လာတယ်။ စာမေးချင်လို့ပါတဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာဝါကျလေး ရှင်းပြခိုင်းတာပါ။ သူက နားမလည်တာကို နားမလည်ဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ သိတာတော့ အများကြီး သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါလေးကိုပဲ မသိတာဆိုတဲ့ ဂိုက်မျိုးနဲ့ လာမေးတာပါ။ ဒီက သိသလောက်လေးရှင်းပြတော့ သူက ပြန်ပြန်ငြင်းချက်တွေ ထုတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ပြောလိုက်တာက အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာစာအုပ်က ရှာမတွေ့ဖြစ်နေခဲ့တာ။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်တို့ ငြင်းခုန်လိုက်ရတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအဖြစ်တွေ များလာတော့ “စာသင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဥပမာလေးအတိုင်း လုပ်တာပဲ ကောင်းမယ်”လို့ တွေးတတ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါက ဘာသာခြားတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကို လာဆွေးနွေးတာ။ သူက “ဗုဒ္ဓက ဖန်ဆင်းမှုကို ပယ်တယ်ဆိုတာဟာ တကယ်လား”တဲ့။ “ဟုတ်တယ်၊ ပယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားအကျကောက်မှာစိုးလို့ ပြောရအုံးမယ်၊ ဖန်ဆင်းမှုကို ပယ်တယ်ဆိုတာဟာ ကမ္ဘာလောကကြီး(စကြာဝဠာကြီး)နဲ့ သက်ရှိသက်မဲ့တွေ၊ အဲဒီသက်ရှိသက်မဲ့တွေရဲ့ အကောင်း၊ အဆိုးအားလုံးကို ထာဝရဘုရားက ဖန်ဆင်းတာကို ပယ်တာ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်အားကနေ အကျိုးတရားတစ်ခုကို ဖန်ဆင်းတာကျတော့ ဖန်ဆင်းတာလို့ မသက်မှတ်ဘူး၊ ဖန်တီးတာလို့ပဲ ခေါ်တယ်”လို့ ခပ်ရှည်ရှည် ရှင်းပြလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ပြောလိုက်တော့ သူက ဟားတိုက်ရယ်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း အံ့သြသွားပါတယ်။ ကြောင်သွားတယ်။ “ဘာဖြစ်လို့ ရယ်တာလဲ”ဆိုတော့ သူက “ဂေါတမဘုရားကိုယ်တိုင် အ၀ိဇ္ဇာဖုံးနေတော့ အရှင်တို့ ဘယ်လိုလုပ် အ၀ိဇ္ဇာက လွတ်မလဲ”တဲ့။ “ဘယ်လိုလဲ ရှင်းပါအုံး”ဆိုတော့ “ဒီလိုလေ တကယ်တော့ ဂေါတမဆိုတာကလည်း ထာဝရဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းထားတာ၊ ဂေါတမဟာ သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ အရှင်ကိုတောင် မမှတ်မိမသိရှိလောက်အောင် အ၀ိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။ “အော်…ဆွေးနွေးမှု၊ သင်ကြားမှုများအတွက် ကော်ဖီခွက်ကို အရင်ဆေးကြောရှင်းလင်းဖို့ တကယ်လိုအပ်လှပါလား”လို့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါက ဒကာမတစ်ယောက်က “တရားအားထုတ်ချင်လို့ ဦးဇင်းသိတဲ့ နည်းလေးရှိရင် ပြောပါအုံး”တဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်တပြေ ပြီးသွားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူက သူသိသမျှလေး၊ သူအားထုတ်ဖူးသမျှလေးတွေနဲ့ ဆရာပြန်လုပ်သွားပါတယ်။ သဘောရိုးနဲ့ သိချင်တာကို အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးပြောဆိုရတာကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ “ဦးဇင်းပြောတာတွေက သိပ်မဟုတ်သေးဘူး၊ တပည့်တော် သိထားတာကမှ တကယ့် တရားအတွေ့အကြုံ”လို့ မပြောသော်လည်း ပြောနေသလို ဖြစ်နေခဲ့တာကို သတိထားမိပါတယ်။ ပြောရင်းပြောရင်း သိလာရတာက သူဟာ ကိုယ့်ဆီက တရားအားထုတ်နည်းကို တကယ်သိချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ ဆရာလုပ်ချင်လို့ ကြွားချင်လို့ မေးနေတာပါလားလို့ သိလိုက်ရတယ်။ “အော်… တရားအားထုတ်တာလည်း ကော်ဖီခွက်လေးကို အရင်သန့်စင်ဆေးကြောထားမှ အသိထူးနိုင်မည် မဟုတ်ပါလား”လို့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါက မြတ်စွာဘုရားက ထိုနည်းနှင်နှင် ဥပမာလေးတွေ ပေးပြီးဟောထားတဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေတွေအချို့ကို အမှတ်ရမိပါတယ်။ “အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်တဲ့ အရသာရှိတဲ့ စတုမဓူကို ရယူစားသုံးချင်ရင် ထည့်တဲ့ခွက်ကို အရင်ဆုံး ဆေးကြောသန့်စင်ရမယ်၊ ခွက်က မသန့်ရှင်းရင် စတုမဓူကလည်း ပျက်စီးသွားမယ်၊ ခွက်က အထူးသန့်ရှင်းနေမှ ထည့်လိုက်တဲ့ စတုမဓူကလည်း သန့်စင်ပြီး စားလို့ကောင်းမယ်…”လို့ ဟောကြားထားချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေ ရှိခဲ့ရင် ထည့်စရာခွက်လေးကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ ဗလာဖြစ်သွားအောင် အရင်ကြိုးစားသင့်ပါလား”လို့ အတွေးအိမ် ယှက်ဖွဲ့နေမိပါတယ်။
Posted by ashin kusalasami at 3:59 PM 1 comment:
မြို့စားကြီးပါယာသိနှင့် တမလွန်ဘ၀ပြဿနာ (နိဂုံး)
အရှင်ကုမာရကဿပက နောက်ထပ် ဥပမာတစ်ခုဖြင့် ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုဥပမာသည် ယနေ့ခေတ်ကာလ အများသိဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
“တစ်ခါက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စီးပွားရှာထွက်ကြတယ်။ လမ်းမှာ ပိုက်ဆံလျှော်ထုပ်တွေကို တွေ့လို့ တစ်ထုပ်စီ ထမ်းခဲ့ကြတယ်။ နောက်တစ်နေရာမှာ ပိုက်ဆံလျှော်ချည်ထုပ်တွေ့တယ်။ အဲဒီအခါ တစ်ဦးက “သူငယ်ချင်း ဒီမှာ ပိုက်ဆံလျှော်ချည်ထုပ်ကို တွေ့နေပြီဆိုတော့ ပိုက်ဆံလျှော်ထုပ်ကြီးကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံလျှော်ချည်ထုပ်ကို သယ်သွားကြရအောင်”လို့ ပြောတယ်။ အခြားသူငယ်ချင်းက “ဒီပိုက်ဆံလျှော်ထုပ်ကြီးကို အဝေးကြီးကတည်းက သယ်လာရတာ၊ လွှင့်ပစ်ရမှာ နှမြောစရာကြီး”လို့ဆိုကာ ပိုက်ဆံလျှော်ထုပ်ကိုသာ ထမ်းခဲ့လေတယ်။ တစ်နေရာမှာ ဂုံလျှော်ထုပ်ကို တွေ့ပြန်တယ်။ တစ်ဦးက ပိုက်ဆံလျှော်ချည်ကို ထားခဲ့ပြီး ဂုံလျှော်ထုပ်ကို ယူတယ်။ တစ်ဦးက မူလပိုက်ဆံလျှော်ထုပ်ကိုသာ ဆက်လက်သယ်ခဲ့တယ်။ အစဉ်အတိုင်း ဂုံလျှော်ချည်ထုပ်၊ ဂုံလျှော်ချည်အ၀တ်ထုပ်၊ ၀ါဂွမ်း၊ ၀ါချည်၊ ၀ါချည်အ၀တ်၊ သံ၊ ခဲပုပ်၊ ဘင်၊ ငွေ၊ ရွှေ…တို့ကို တွေ့ခဲ့ရာ တစ်ဦးက တန်ဖိုးနည်းရာကို စွန့်ပစ်ပြီး တန်းဖိုးကြီးရာကို ယူခဲ့တယ်။ အခြားတစ်ဦးက မူလတန်ဖိုးနည်း ပိုက်ဆံလျှော်ထုပ်ကြီးသာ သိမ်းပိုက်လာခဲ့တယ်။ ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့၊ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ သူကတော့ အဟောင်းကြီးကို အမြတ်တနိုး မထားတော့ဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့အရာကို တွေ့ရင် စွန့်ပစ်နိုင်တယ်။ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့သူကတော့ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့အသစ်ကို တွေ့နေတာတောင် အဟောင်းကြီးကို မစွန့်ပစ်နိုင်ကြဘူး။
မြို့စားကြီး သင်ဟာလည်း ဆင်ခြင်ဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ သူလိုပဲ။ အခု ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရားဓမ္မအယူအဆတွေကို တွေ့လာရပြီ။ ဒါပေမယ့် သင်က သင့်ရဲ့ အယူဝါဒအဟောင်းကြီးကို မစွန့်ပစ်နိုင်သေးဘူး။ အသိတရားရှိလာပါတော့ မြို့စားကြီး၊ သင့်အယူအဆတွေကို ပြောင်းလိုက်ပါ”
“ကျွန်ုပ်က စောစောစီးစီး အရှင်ပြောတာကို လက်ခံလိုက်ရင် အရှင့်ဆီက အခုလို ထူးထူးဆန်းဆန်း တရားစကားတွေ ဘယ်လိုလုပ် ကြားရတော့မလဲ၊ အရှင့်အနေနဲ့ တပည့်တော် ကန့်လန့်တိုက်နေတာတွေကို ဘယ်လိုများ တုန့်ပြန်မလဲလို့ သိချင်တာကြောင့် ပေတေပြီး ငြင်းနေရတာပါ (သူပြောလိုက်တော့လည်း အဟုတ်သား၊ မြို့စားကြီးသာ ပေတေပြီး ငြင်းမနေခဲ့ဘူးဆိုရင် စာရေးသူတို့ ဒီလောက်ဗဟုသုတတွေ ဘယ်တိုးမလဲ)”ဟု ပြောလိုက်သည်။
မြို့စားကြီးထံမှ အဆိုပါစကားကို ကြားရသောအခါ အရှင်ကုမာရကဿပက ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပြီး တရားဓမ္မများ ဆက်လက်ဟောကြားခဲ့လေသည်။ ဤမျှလောက် ကပ်သီးကပ်သပ် ဆိုတတ်သော မြို့စားကြီးကို မည်သို့သောတရားများ ဟောလေသနည်း။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားဓမ္မက ထူးခြားမှုတော့ မရှိပါ။ အကျဉ်းချုပ်လိုက်လျှင် ဒါန၊ သီလနှင့် ဘာဝနာသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်သည် မည်၍မည်မျှ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ဟောနေသည်ဖြစ်စေ လိုရင်းက ဤသုံးမျိုးသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသုံးမျိုးသို့ သတ္တ၀ါများ၏ ဓလေ့စရိုက်များအရ ချဉ်းကပ်ပုံ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသဖြင့် သူ့နည်း၊ ကိုယ်နည်းများအဖြစ် တွေ့မြင်နေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ကုမာရကဿပ ဟောကြားခဲ့သောတရားများက ဤသုတ်တော်တွင် ရှည်လျားစွာ ပါဝင်နေပါသည်။ ထိုတရားများကို မဖော်ပြတော့ပါ။ အကျယ်ဖတ်ရှုလိုပါက ဒီဃနိကာယ်၊ မဟာဝဂ်၊ ပါယာသိသုတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စာဖတ်သူများ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတ၊ မြတ်စွာဘုရားခေတ် အိန္ဒိယတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ လှုပ်ရှားခဲ့ပုံများ၊ သာသနာပြုခဲ့ကြပုံများ…စသော သုတများကို ရရှိကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
မြို့စားကြီး ပါယာသိနှင့် တမလွန်ဘ၀ပြဿနာ….ဤနေရာတွင် ပြီးပါပြီ…
Posted by ashin kusalasami at 3:09 PM 1 comment:
မြို့စားကြီးပါယာသိနှင့် တမလွန်ဘ၀ပြဿနာ (၆)
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၁၁)
ထိုကဲ့သို့ မြို့စားကြီး၏ မထင်မှတ်သောစကားကို ကြားလိုက်ရသောအခါ အရှင်ကုမာရကဿပက အောက်ပါဥပမာဖြင့် ခပ်နာနာ နှိပ်ကွပ်လိုက်သည်။
“မြို့စားကြီး သင် လှည်းသမားနှစ်ဦး ပုံပြင်ကို ကြားဖူးသလား။ လှည်းသမားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ရှိတယ်။ တစ်ဦးစီမှာ နောက်လိုက်လှည်းသမား ၅၀၀-စီ ရှိကြတယ်။ တစ်ဦးက ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတယ်။ ပါးပါးနပ်နပ် လုပ်ဆောင်တတ်တယ်။ အခြားတစ်ဦးကတော့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိဘူး၊ မိုက်မိုက်မဲမဲ လုပ်ဆောင်တတ်တယ်။ တစ်နေ့မှာ တစ်ရက်တည်း ခရီးအတူသွားရဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ပထမလှည်းသမားက စဉ်းစားတယ်။ “လှည်းအစီး ၁၀၀၀-လုံး ခရီးအတူ သွားလို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အစားအသောက်၊ ရေ…စတဲ့ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်”ပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့ နှစ်ဦး ညှိနှိုင်းကြတယ်။ ဘယ်သူအရင် ခရီးထွက်မလဲပေါ့။ အဲဒီတော့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်နည်းတဲ့ ဒုတိယလှည်းသမားက “ငါ အရင်သွားရင် သူများ မစားရသေးတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားရမယ်။ ငါတို့ နွားတွေကလည်း သူများနွားတွေ မစားရသေးတဲ့ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ဦးဦးဖျားဖျား မြတ်တွေကို စားရမယ်။ မပျက်မစီးဖြစ်နေတဲ့ လမ်းတွေနဲ့လည်း သွားရမယ်။ ဟိုရောက်ရင်လည်း အခြားကုန်သည်တွေ မရှိသေးတဲ့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ဈေးခေါ်နိုင်တယ်”လို့ စဉ်းစားပြီး “ကျွန်ုပ်အရင် သွားမယ်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဒီတော့ ပထမလှည်းသမားက စိတ်ထဲမှာ အတော်ကျေနပ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတွေးတာက “ဒုတိယအဖွဲ့အနေနဲ့ သွားလို့ရှိရင် ပထမသွားထားတဲ့ လှည်းသမားတွေ ခူးစားထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်တွေက တို့သွားချိန်ရောက်ရင် အညွန့်လေးတွေ ပေါက်နေမယ်။ တို့က ဟင်းသီးဟင်းရွက် အညွန့်လေးတွေသာ စားရမယ်။ ငါတို့ နွားတွေလည်း ပထမနွားတွေ စားထားတဲ့မြတ်ပင်ကပေါက်လာတဲ့ မြတ်နုလေးတွေကို စားရမယ်။ ပထမသွားသူတွေက ရေမရှိတဲ့အရပ်မှာ ရေကန်တွေ တူးထားခဲ့မှာဖြစ်လို့ ရေအတွက် ပူစရာမလိုဘူး။ ပျက်စီးနေတဲ့ လမ်းတွေကို ဖို့သွားကြမယ်၊ ပြင်သွားကြမယ်။ ဒီတော့ လမ်းတွေကလည်း ညီညာနေလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ကုန်သည်တွေနဲ့ ဈေးစကားပြောရတယ်ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ ပထမလှည်းသမားတွေ ထားသွားခဲ့တဲ့ ဈေးနှုန်းအတိုင်း ငါတို့ ရောင်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်”လို့ တွေးထားတာမို့လို့ပါ။
တစ်နေ့တော့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိတဲ့ လှည်းသမားက အရင်ခရီးစသွားတယ်။ ကန္တာရအလယ်ကို ရောက်တော့ ဘီလူးတွေက လှည်းသမားဟန်ဆောင်၊ မိုးရေတွေ စိုရွှဲနေတဲ့ပုံ ဖန်ဆင်းပြီး လှည်းသမားတွေကို ရေတွေ သွန်ပစ်ဖို့ ရှေ့မှာ မိုးတွေ ရွာနေလို့ ရေတွေပေါကြောင်း ဖြားယောင်းကြပါတယ်။ ဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိတဲ့ လှည်းသမားဟာ တပည့်တွေကို ရေတွေသွန်ပစ်ဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့ကို သွားရင်းနဲ့ ရေပြတ်လပ်ပြီး ဘီလူးတွေက အလွယ်တကူ စားသောက်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒုတိယသွားတဲ့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လှည်းသမားကတော့ ရက်အနည်းငယ် ခွာပြီး နောက်ကနေ ခရီးထွက်ပါတယ်။ ကန္တာရအလယ်ရောက်တော့ ဘီလူးတွေက အထက်ပါနည်းအတိုင်း ဖြားယောင်းကြပါတယ်။ ဒီတော့ လှည်းမှူးက စဉ်းစားပါတယ်။ ကန္တာရအလယ်မှာ မိုးရွာတယ်၊ ရေရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မကြားခဲ့ဖူးဘူး။ အရိပ်လည်း မထွက်ကြဘူး။ ဧကန္တ ဒီလူတွေဟာ လူစင်စစ်မဟုတ်ဘဲ ဘီလူးတွေပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ရေတွေကို သူ့အမိန့်မရဘဲ သွန်မပစ်ရ”လို့လည်း အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ တပည့်လှည်းသမားတွေက စောဒက တက်ကြတယ်။ “ရေအိုးတွေ သယ်ပြီး ခရီးသွားရတာ ပင်ပန်းတယ်။ သူတို့ကြည့်ရတာ ရှေ့မှာ တကယ်ပဲ ရေရှိပုံရတယ်။ အ၀တ်တွေကလည်း စိုနေတယ်။ လှည်းဘီးတွေမှာလည်း ရွှံ့တွေ ပေကျံနေတယ်။ ကြာပန်းတွေတောင် ကိုင်လို့။ ဒီတော့ ရေတွေကို သွန်ပစ်သင့်တယ်”လို့ လှည်းမှူးကို ပြောပါတယ်။ ဒီတော့ လှည်းမှူးက အစည်းအဝေးတစ်ခု လုပ်ပါတယ်။
“ကန္တာရအလယ်မှာ မိုးရွာတယ်လို့ ကြားဖူးတဲ့သူ ဘယ်သူ ရှိသလဲ”
“မိုးသက်လေပြင်းအနံ့ကို ဘယ်အရပ်လောက်ကနေ မြင်ရတယ်လို့ ကြားဖူးသလဲ”
“ကဲ အခု မိုးသားတိမ်လိပ်တွေကို ဘယ်သူမြင်ရသလဲ”
“နောက်ပြီး လျှပ်စီးလျပ်တာကို ဘယ်အရပ်လောက်ကနေ မြင်ရသလဲ”
“၄ ယူဇနာ၊ ၅ ယူဇနာလောက်နေ မြင်ရပါတယ်”
“အခု လျှပ်စီးလျပ်တာကို မြင်တဲ့သူရှိလား”
“နောက် မိုးကြိုးပစ်သံကို ဘယ်အရပ်လောက်ကနေ ကြားရတတ်သလဲ”
“၃ ယူဇနာ၊ ၄ ယူဇနာလောက်ကနေ ကြားရတတ်ပါတယ်”
“ကဲ အခု မိုးကြိုးပစ်သံကို ကြားမိတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ”
“တစ်ယောက်မှ မရှိပါ လှည်းမှူးကြီး”
အထက်ပါအတိုင်း ယုတ္တိကျကျ ဉာဏ်ပညာပါပါနဲ့ သုံးသပ်ပြောဆိုပြပြီး ရေတွေကို သွန်မပစ်ဖို့ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဘီလူးတွေ စားတာကို မခံခဲ့ကြရဘူး။
ဒီတော့ မြို့စားကြီး လမ်းမှန်ပေါ်ကို ဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့ လျှောက်လှမ်းတဲ့သူဟာ သူကိုယ်တိုင်လည်း ချမ်းသာရတယ်၊ သူ့ကို မှီခိုနေတဲ့သူတွေကို ချမ်းသာစေတယ်။ သင်ကတော့ အဆင်ဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီး လမ်းမှားကို ဆက်လျှောက်နေရင် ပထမသွားတဲ့ ဆင်ခြင်မဲ့တဲ့ လှည်းသမားလိုပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း မကောင်းဘူး။ သင့်ကို မှီခိုကိုးစားနေသူတွေလည်း မကောင်းဘူး။ အဲဒီတော့ သင့်ရဲ့ မိုက်မဲတဲ့ အယူအဆကြီးတွေကို ပြောင်းလိုက်ပါတော့လား”
ထိုကဲ့သို့ အရှင်ကုမာရကဿပက ခပ်ပြင်းပြင်း စကားလုံးများဖြင့် ပြောလိုက်သော်လည်း မြို့စားကြီးက သူ့အယူအဆကို မပြောင်းနိုင်ကြောင်း၊ အထက်တွင် ဆိုခဲ့သောအကြောင်းပြချက်များဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအသစ်၊ သုတေသနအသစ်များဖြင့် ပြန်လှန်ငြင်းခုံခြင်းကား မပြုလုပ်တော့ပေ။
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၁၂)
ထိုကဲ့သို့ ညင်ညင်သာသာဆိုလိုက်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလိုက်ဖြင့် မည်သို့မျှ ပြောမရသောအခါ အရှင်ကုမာရကဿပက ထိုဥပမာများထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော ဥပမာဖြင့် ထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။
“မြို့စားကြီး သင်လုပ်ပုံက မစင်ထုပ်သယ်သူလို ဖြစ်နေပြီ”
“ဘယ်လိုကြောင့် ကျွန်ုပ်က မစင်ထုပ်သယ်သူနဲ့ တူရမှာလဲ”
“ပြောပြမယ် မြို့စားကြီး နားထောင်၊ တစ်ခါက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ၀က်တွေကို မွေးပြီး စီးပွားလုပ်တယ်။ တစ်နေ့တော့ အခြားမြို့ကို ခရီးသွားတယ်။ တစ်နေရာရောက်တော့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ မစင်ခြောက်တွေကို တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီမစင်ခြောက်တွေကို ငါ ၀က်စာလုပ်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးပြီး အပေါ်ရုံအ၀တ်ကိုဖြန့်ပြီး မစင်ခြောက်တွေကို သယ်သွားသွားပါတယ်။
တစ်နေရာရောက်တော့ မထင်မှတ်ဘဲ မိုးကြီးသည်းထန်စွာ ရွာချလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ထိုအမျိုးသားခေါင်းပေါ်မှာ ရွက်ထားတဲ့ မစင်တွေက အရည်ပျော်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို မစင်တွေ ပေလူးကုန်ပါတယ်။ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ အခြားသူတွေက -ဒီလူ ရူးများနေရော့သလား၊ မစင်ထုပ်ကြီးကို ညစ်ပတ်ပေရေစွာနဲ့ ထမ်းလာတယ်-လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအခါ ထိုအမျိုးသားက - ငါက ရူးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ သင်တို့ကသာ ရူးနေတာ။ ငါက ဒီမစင်ခြောက်တွေကို ၀က်စာလုပ်မလို့ သယ်လာတာ-လို့ ပြောပါတယ်။
မြို့စားကြီး သင်ဟာလည်း ဒီအမျိုးသားလိုပဲ။ ကိုယ့်အတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိနိုင်တဲ့ ဒီအယူအဆမှားတွေကို အရှက်မရှိ သယ်လာနေသေးတယ်”ဟု နှိပ်ကွပ်လေသည်။
ထိုဥပမာဖြင့် ပြောသော်လည်း အထက်တွင် ဆိုခဲ့သောအကြောင်းပြချက်များ (သူများတွေ ကဲ့ရဲ့မှာစိုးလို့၊ အရှင့်ကို အရှုံးမပေးချင်လို့ စသည်)ဖြင့် သူ့အယူအဆများကို မပြောင်းနိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၁၃)
အရှင်ကုမာရကဿပသည် နောက်ထပ် ဥပမာတစ်ခုဖြင့် မြို့စားကြီးကို ဆိုပြန်လေသည်။
“မြို့စားကြီး သင်ဟာ မသမာနည်းနဲ့ ကစားတဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ အန်ကစားသမားနဲ့ တူနေပြီ”
“ပြောပြမယ် နားထောင်၊ တစ်ခါက အန်ကစားပွဲကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ အန်ကစားသမားတွေထဲမှာ ကစားသမားတစ်ဦးဟာ ရှုံးနိုင်တဲ့အန်ကို ပါးစပ်ထဲ မျိုမျိုပြီး ကစားတယ်။ အဲဒီလို ညစ်ပတ်ပြီးကစားတော့ သူကချည်းပဲ နိုင်နေတယ်။ ဒါကို ရိပ်မိတဲ့သူတစ်ဦးက သူ ပါးစပ်ထဲမျိုတာကို တွေ့သွားတယ်။ အဲဒီတော့ အန်တွေကို အဆိပ်လိမ်းပြီးတော့ ကစားတယ်။ ဒီအခါမှာ ညစ်ပတ်တဲ့အန်သမားဟာ အန်တွေကို မျိုပြန်တယ်။ ထိုအခါ အဆိပ်သုတ်လိမ်းသူ အန်သမားက - အဆွေ သင်ဟာ ရှုံးမည့်အန်ကို မျိုမျိုပြီး ကစားတယ်။ အဲဒီအန်တွေမှာ အဆိပ်တွေ လိမ်းထားတာကို သင်က မသိဘူး။ ယုတ်မာညစ်ပတ်တဲ့အန်သမား အန်တွေကို မျိုပါအုံး၊ ထပ်ထပ်မျိုပါအုံး၊ သင်ဟာ အဆိပ်ဒဏ်ရာနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရလိမ့်မယ်-လို့ ပြောပါတယ်။
မြို့စားကြီး သင်ဟာလည်း အဲဒီညစ်ပတ်တဲ့ အန်သမားလိုပဲ မကောင်းတဲ့အယူအဆတွေကို မျိုမိနေပြီ။ သင့်အယူအဆတွေကို ပြောင်းလိုက်ပါတော့လား”ဟု တိုက်တွန်းပြန်လေသည်။
ထိုကဲ့သို့ ခပ်နာနာ ခပ်ပြင်းပြင်း ဥပမာများဖြင့် နှိပ်ကွပ်ပါသော်လည်း မြို့စားကြီးမှာ အပြုံးမပျက်။ မပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းသာ ထပ်ပြောဆိုနေခဲ့လေသည်။
Posted by ashin kusalasami at 6:55 PM No comments:
မြို့စားကြီးပါယာသိနှင့် တမလွန်ဘ၀ပြဿနာ (၅)
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၈)
“မြို့စားကြီး ဒီလိုဆိုရင် သင့်ကို ထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ ဥပမာတစ်ခု ပြောပြမယ်။ အေးနေတဲ့ သံခဲနဲ့ ရဲရဲတောက်နေအောင် ပူနေတဲ့ သံခဲ … ဘယ်ဟာက ပိုလေးသလဲ”
“အေးနေတဲ့ သံခဲက လေးပါတယ်”
“ဟုတ်တယ်။ သံခဲဟာ အပူဓာတ်နဲ့လေဓာတ် ပေါင်းလိုက်ရင် ပေါ့တယ်။ အပူဓာတ်၊ လေဓာတ်မရှိတော့ရင် အလေးချိန်က များသွားတယ်။ ဒီသဘောတရားလိုပဲ သက်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အသက်၊ ကိုယ်ငွေ့နဲ့ ၀ိညာဏ်(စိတ်)ပေါင်းလိုက်ရင် ပေါ့နေတယ်။ အဲဒါတွေ မရှိတော့ရင် လေးသွားတယ်။ အသက်မရှိလို့ လေးသွားတာနဲ့ နောက်ဘ၀မရှိတာ ဘယ်လိုမှ မဆက်စပ်ဘူး မြို့စားကြီး။ ဒီတော့ သင့်အယူအဆတွေကို ပြောင်းလိုက်ပါတော့”
“မပြောင်းနိုင်ပါဘူး အရှင်၊ ကျွန်ုပ်မှာ သုတေသနလုပ်ထားတာတွေ ရှိပါသေးတယ်”
မြို့စားကြီး၏ သုတေသန (၆)
“ရှေ့တုန်းကလိုပဲ။ သေဒဏ်အပြစ်ပေးခံရတဲ့ သူခိုးကို အသား၊ အရိုး၊ အကြော၊ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ တစ်ခုမှ မပျက်စီးအောင် သတ်ဖို့ ပြောလိုက်တယ်။ သေတော့မယ့်ဆဲဆဲဖြစ်တဲ့အခါမှာ လေးဘက်လေးတန် ၀ိုင်းကြည့်တယ်။ အသက်ထွက်တာကိုများ မြင်ရမလားလို့၊ အသက်ထွက်တာကို မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပက်လက်လှန်ခိုင်းတယ်၊ ဘယ်ညာလှည့်ခိုင်းတယ်၊ မျိုးစုံ လှည့်ထားပြီး စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ အသက်ထွက်သွားတာကိုတော့ မမြင်ရပါဘူး။ ဒါနဲ့ တုတ်နဲ့ ရိုက်ခိုင်းတယ်၊ ထုခိုင်းတယ်။ မတွေ့ဘူး။ နောက်ပြီး သူ့မှာက မျက်စိလည်း ရှိနေပါလျှက် မမြင်တော့ဘူး၊ နားလည်းရှိပါလျှက် မကြားတော့ဘူး။ …. သူ့ရဲ့ အာရုံငါးပါးက ပသာဒတွေ ရှိနေပါလျှက် ဘာမှ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဆိုလိုတာက သူအသက်ထွက်တာကို လုံးဝမတွေ့ရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရှေ့နောက်ဘ၀တွေမှာ ပြေးလွှားကျင်လည်တတ်တဲ့ အသက်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒီတော့ နောက်ဘ၀ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့”
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၉)
“မြို့စားကြီး သင့်သုတေသနကလည်း နားလည်တဲ့သူတွေအတွက် ရယ်စရာ ဖြစ်နေပြီ။ သင့်အဖြစ်က ခရုသင်းအသံကို လိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေနဲ့ တူနေပြီ”
“ဘယ်လိုများလဲ အရှင်၊ ခရုသင်းအသံကို ဘယ်လို ရှာတာလဲ”
“သင့်ကို ပြောပြမယ်။ ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာ ဥပမာနဲ့ ပြောရင် နားလည်ကြတယ်”
“ဟုတ်ပါပြီ အရှင်၊ ပြောမှာသာ ပြောပါ”
ဤနေရာတွင် “ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာ ဥပမာနဲ့ ပြောရင် နားလည်ကြတယ်”ဟူသော စကားမှာ မြို့စားကြီးကို အနည်းငယ် ထည့်သောစကားဟု နားလည်မိသည်။ ယနေ့ခေတ် စကားပြောရာတွင် “မင်းကို ဒီလောက်ပြောနေတာ နားလည်သင့်တယ်။ အသိဉာဏ်ရှိသူတွေဟာ ဒီလောက်ပြောရင် သဘောပေါက်တယ်”ဆိုသော လေသံမျိုး ဖြစ်သည်ဟု ထင်သည်။ အရှင်ကုမာရကဿပသည် ဤစကားမျိုးကို နေရာတိုင်းတွင် ထည့်မပြောဘဲ အချို့နေရာများတွင်သာ ထည့်သုံးသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“တစ်ခါက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ တောရွာတစ်ခုကို ရောက်သွားတယ်။ သူနဲ့အတူ ခရုသင်းလေးလဲ ပါသွားတယ်။ ခရုသင်းမှုတ်တော့ ရွာသားတွေ ၀ိုင်းနားထောင်ကြတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ ခရုသင်းကို ဘေးမှာ ချထားတယ်။ ရွာသားတွေက စဉ်းစားတယ်။ ဒီလောက် အသံသာယာနေတာ ဘာလေးဘာလိမ့်။ အဲဒီတော့ မေးတယ်။ ဒါ ဘာလေးလဲပေါ့။ အမျိုးသားကလည်း ဒါ ခရုသင်းခေါ်တယ်။ အသံသာသာလေး ထွက်နေတာလည်း ဒီခရုသင်းပဲလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ရွာသားတွေဟာ ခရုသင်းကို ပက်လက်ချထားကြည့်တယ်၊ မှောက်ခုံထားကြည့်တယ်၊ ဘယ်ညာစောင်းကြည့်တယ်၊ တုတ်နဲ့ရိုက်ကြည့်တယ်၊ ဓားနဲ့ခုတ်ကြည့်တယ်၊ ..အို ခရုသင်း အသံထွက်ပါလော့၊ အသံထွက်ပါလော့-လို့ ပြောကြည့်တယ်။ အသံက ထွက်မလာဘူး…
အဲဒီတော့ အမျိုးသားက စဉ်းစားတယ် - ဒီရွာသားတွေဟာ တော်တော်မိုက်မဲကြပါလား၊ ခရုသင်းအသံကိုများ ဘာဖြစ်လို့ လိုက်ရှာနေကြပါလိမ့်-လို့ပေါ့။ အဲဒီလို စဉ်းစားပြီး ခရုသင်းကို ကောက်ယူ၊ မှုတ်ပြလိုက်ပြီး ထွက်သွားခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ ရွာသားတွေဟာ -အော် ခရုသင်းဆိုတာ မှုတ်သူရယ်၊ မှုတ်ခြင်းရယ်၊ လေရယ် သုံးမျိုးပေါင်းမှ အသံမြည်တာပါလား-လို့ သဘောပေါက်လာခဲ့ကြတယ်။ မြို့စားကြီး သင်ဟာလည်း ဒီရွာသားတွေလိုပါပဲလား။ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ အသက်၊ ကိုယ်ငွေ့နဲ့ ၀ိညာဏ်တို့ပေါင်းတဲ့အခါ အာရုံငါးပါးက အသက်ဝင်လာတယ်။ လှုပ်ရှားလာတယ်။ အဲဒီသုံးခု မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဘာအသက်ဝင်မှု၊ ဘာလှုပ်ရှားမှုမှ မရှိတော့ဘူး။ ဒီတော့ သင့်အယူအဆတွေကို ပြောင်းလိုက်ပါတော့”
“မပြောင်းနိုင်ပါဘူး အရှင်။ ကျွန်ုပ် သုတေသနတွေ လုပ်ထားတာ ရှိပါသေးတယ်”
“ကဲ ရှိသေးရင်လည်း ပြောပါ”
မြို့စားကြီး၏ သုတေသန (၇)
“အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလိုပဲ။ သေဒဏ်ပေးခံရတဲ့ သူခိုးကို အရေထူတွေ ခွါတယ်၊ အသက်ဆိုတဲ့ကောင်ကို မတွေ့ဘူး။ အရေပါးတွေ ခွါတယ်၊ မတွေ့၊ အသားတွေ လှီးတယ်၊ မတွေ့၊ အရိုးတွေကို တစ်စစီ ပိုင်းကြည့်တယ်၊ ချဉ်ဆီတွေ ထုတ်ကြည့်တယ်၊ ဘာအသက်မှ မတွေ့ဘူး။ ဒီလောက်ရှာနေတာတောင် မတွေ့မှတော့ မရှိလို့ပေါ့”
မြို့စားကြီး လက်ထက် သေဒဏ်အပေးခံရသူများမှာ မသက်သာလှပါ။ မြို့စားကြီး၏ သုတေသနခန်းထဲ ရောက်သွားရသည်ချည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကြံကြံဖန်ဖန်လည်း လုပ်တတ်ပါပေတယ်ဟု တွေးမိပါသည်။ ဤနေရာတွင် အရေးကြီးသောအရာတစ်ခု ရှိပါသည်။ မြို့စားကြီးလုပ်နေသည့်ပုံမှာ ဟိန္ဒူဝါဒအဆိုများကို ကန့်ကွက်ဖို့ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဟိန္ဒူဝါဒအရ “လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ဟိုဘ၀သည်ဘ၀ ပြေးသွားတတ်သော အတ္တ-၀ိညာဏ်-အသက်ကောင်ကလေး ရှိနေသည်၊ ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးသော်လည်း ထိုအကောင်ကလေးက မပျက်မစီး အမြဲတည်နေသည်”ဟု ဆိုသည်။ ထိုအဆိုကို မှားကြောင်း သက်သေပြနေသည်ဟု ထင်မိသည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒအရကား အသက်ကောင်လေးကြောင့် နောက်ဘ၀စသည် ပြေးလွှားနေခြင်း မဟုတ်ပေ။ သတ္တ၀ါတို့ ပြုခဲ့သမျှ အကောင်းအဆိုးကံများ၏ သတ္တိ(အဟုန်)အတိုင်း သံသရာတွင် ပြေးလွှားကျင်လည်နေကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ မတူညီသော်လည်း ဗုဒ္ဓ၀ါဒက နောက်ဘ၀စသည်ကို လက်ခံထားသည်ဖြစ်ရာ သွယ်ဝိုက်ပြီး ဆက်စပ်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေရလေသည်။
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၁၀)
“မြို့စားကြီး သင် ဘယ်လောက် အဆင်အခြင် မဲ့တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါတော့။ သင်ဟာ မီးလုပ်ကျွေးတဲ့ရသေ့ရဲ့ မွေးစားသားလိုပဲ မိုက်မဲလိုက်တာ”
“တောအုပ်တစ်ခုမှာ မီးလုပ်ကျွေးတဲ့ ရသေ့တစ်ပါးရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ တောထဲမှာ စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ကောက်ယူမွေးစားလိုက်တယ်။ တစ်နေ့မှာ မြို့ကို တက်ပြီး လုပ်စရာကိစ္စပေါ်လာတယ်။ ဒီတော့ သူ့သားကို - ချစ်သား…ဖခင်မြို့ကို သွားစရာရှိတယ်။ ဒီတော့ မီးကို မငြိမ်းအောင် လုပ်ထားပါ။ ရော့ ဒီမှာ ပဲခွပ်(ပုဆိန်ကဲ့သို့ ထင်းခွဲစရာလက်နက်)၊ ဒီမှာ ထင်း၊ ဒီမှာ မီးပွတ်ခုံ…ဒါတွေနဲ့ မီးကို မငြိမ်းအောင် စောင့်ရှောက်ပါ-ဆိုပြီး ထားခဲ့ပါတယ်။ ရသေ့ကြီးသွားပြီးနောက်မှာ ကလေးက ဆော့ကစားရင်း မီးက ငြိမ်းသွားတယ်။ ဒါနဲ့ မီးမွှေးမယ်ဆိုတော့ မီးက ရှာလို့ မတွေ့ဘူး။ ဒီတော့ ကလေးက စဉ်းစားတယ်။ - ရသေ့ကြီးက မီးမငြိမ်းအောင် ဒါတွေကို ပေးခဲ့တယ်၊ ဒါတွေထဲမှာ မီးရှိမှာ သေချာတယ်-လို့ တွေးပြီး မီးပွတ်ခုံကို ပဲခွပ်နဲ့ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ခွဲပါတယ်၊ နောက်ဆုံးမရတော့ မီးပွတ်ခုံကို အမှုန့်ဖြစ်အောင် ထောင်းပါတော့တယ်။ ဘယ်လို ခွဲခွဲ မီးကိုတော့ မရခဲ့ပါဘူး။ ရသေ့ကြီး ပြန်ရောက်လာတော့ မီးကလည်း ငြိမ်းနေပြီ။ မီးပွတ်အစုံကလည်း အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်နေပြီ။ -တော်တော် မိုက်မဲတဲ့ ကလေးပါလား၊ မသိတတ်လေတကား -လို့ ရသေ့ကြီးက စဉ်းစားပါတယ်။
စဉ်းစားပြီး - ချစ်သား မသိတတ်၊ မလိမ္မာသော လူမိုက်တွေဟာ မီးကို ရှာကြတယ်။ ပညာရှိပြီး တတ်သိနားလည်သူတွေကတော့ မီးကို မရှာကြဘူး-လို့ ဆိုပါတယ်။
မြို့စားကြီး ဒီဥပမာလိုပဲ သင့်အနေနဲ့လည်း အဆင်ခြင်ကင်းမဲ့စွာ အသက်ကို ရှာနေလိုက်တာ။ သင့်အယူအဆတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတော့”
အထက်ပါ စကားရပ်များတွင် မီးကိုလုပ်ကျွေးသော ရသေ့ဆိုသည်မှာ ထိုခေတ်အခါက အိန္ဒိယတွင် မီးကို တစ်သက်တာလုံး မငြိမ်းအောင် လေ့ကျင့်အားထုတ်ကြသော ရသေ့များ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် မီးကို တစ်သက်လုံး မငြိမ်းစေဘဲ မီးနတ်ကို ပူဇော်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် အရှင်ကုမာရကဿပစကားတွင် မြို့စားကြီးကို ခပ်နာနာပြောလိုက်သော စကားများကိုလည်း တွေ့လာရသည်။
အရှင်ကုမာရကဿပက အထက်ပါအတိုင်း ပြောလိုက်သောအခါ မြို့စားကြီးက သူ့တွင် သုတေသနတွေ လုပ်ထားကြောင်း၊ ထိုသုတေသနတွေကြောင့် သူ့အယူအဆကို မပြောင်းနိုင်ကြောင်းကား မပြောတော့ပါ။ သို့ရာတွင် မြို့စားကြီးက….
“အရှင်ကုမာရကဿပ … သင် ဘယ်လိုပြောပြော ကျွန်ုပ်ကတော့ ဒီအယူအဆကို မစွန့်နိုင်ပါဘူး”
“ဘယ်လို ဖြစ်လို့လဲ မြို့စားကြီး”
“ကျွန်ုပ် တမလွန်ဘ၀မရှိဘူးလို့ ယူဆတာ၊ ကုသိုလ်အကုသိုလ် အကျိုးမရှိလို့ ယူဆတာတွေကို ပသေနဒီကောသလမင်းကြီးလည်း သိတယ်။ အခြားတိုင်းတစ်ပါး မင်းတွေလည်း သိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအယူကို မစွန့်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်ယူဆသလို ယူဆနေသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်က ဒီအယူကို စွန့်လိုက်ရင် -မြို့စားကြီးတော့ အယူပြောင်းသွားပြီ၊ မှားနေတဲ့အယူကို ယူမိသွားပြီ-လို့ အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်အယူအဆကို မပြောင်းနိုင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး အရှင့်စကားတွေကို အန်တုချင်သေးတယ်၊ အရှင်နဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ချင်သေးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်အယူအဆတွေကို မစွန့်နိုင်ပါဘူး”ဟု ဆိုလေသည်။
မြို့စားကြီး ပြောလိုက်သော ဤစကားများကို သဘောကျမိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယနေ့ခေတ် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ထိုကဲ့သို့ သဘောထားလေးများ ရှိနေတတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံ တစ်ဖက်လူ ပြောလိုက်သောစကားများမှာ သဘာဝကျသည်၊ မှန်သည်။ သို့ရာတွင် အများအလယ်တွင် လွယ်လွယ်အရှုံးပေးလိုက်သူဟု ကင်ပွန်းတပ်ခံရမှာ ကြောက်သဖြင့် ပေခံနေတတ်ကြပါသည်။ တစ်ဖက်လူကို အရှုံးမပေးချင်သဖြင့်လည်း မျက်စိမှတ်ငြင်းဆိုနေတတ်ကြပါသည်။ ဤသည်မှာ လူ့သဘာဝတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း အလွန်အကျွံ “ဘူး”ခံနေလျှင်ကား ကောင်းသည့်သဘောထားတော့ မဟုတ်ပါလေ။
Posted by ashin kusalasami at 9:05 PM No comments: